Himalaya Dainik » बुधले गर्दैछ राशि परिवर्तन, बार्है राशिमा पर्नेछ यस्तो प्रभाव !
बुध ग्रहलाई ज्योतिषशास्त्रमा युवराजको स्थान प्राप्त छ। २ अगस्ट बिहान ३ बजेर ३१ मिनेट जाँदा बुध ग्रह गोचर परिवर्तन गरि कर्कट राशिमा प्रवेश गर्नेछ र १७ अगस्ट ८ बजेर २९ मिनेटसम्म यहि राशिमा हुनेछ।
कर्कट राशिमा सूर्य भगवान पहिले नै अवस्थित छन्, र बुधको गोचर भएपछि एक अत्याधिक शुभ बुधादित्य योग बन्नेछ। बुध राशि बुद्धि,छाला र व्यवसायसँग सम्बन्धित छ। यस्तोमा बुधले गोचर परिवर्तन गर्दा सबै १२ राशिमा प्रभाव पार्नेछ।
मेष राशि– रोजगारको खोजमा रहेका मानिसलाई सफलता प्राप्त हुनेछ। आर्थिक स्थति राम्रो हुनेछ। आमाको स्वास्थ्यको साथै आफ्नो स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिन जरूरी देखिन्छ। पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो रहनेछ। बोली सम्बन्धि कार्यमा लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ।
वृष राशि– यस राशिका मानिसको लागि यो समय मिश्रित रहनेछ। आत्मविश्वासमा कमी महशुस हुनेछ। परिवारको साथ सम्बन्धमा सुधार आउनेछ र परिवारको सहयोग भरपूर प्राप्त हुनेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि समय अत्यन्त शुभ छ।बोलीमा भने ध्यान दिनुहोला।
मिथुन राशि– आर्थिक लाभ प्राप्त हुने सम्भावना रहेको छ। परिवारमा सुख-शान्तिमय वातावरण कायम रहनेछ। बोली सम्बन्धित कार्यमा लाभ मिल्ने देखिन्छ। वाणी तथा आकर्षक व्यवहारले मानिस तपाईंप्रति आकर्षित हुनेछन्। सामाजिक मन-सम्मानमा वृद्धि हुनेछ।
कर्कट राशि– यस राशिको लागि यो समय चुनौतीपूर्ण रहनेछ। कर्यक्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न निकै कडा परिश्रम गर्नु पर्ने देखिन्छ। परिवारमा मनमुटावको अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना रहेको छ। खर्चमा वृद्धि हुनाले आर्थिक पक्ष कमजोर हुने देखिन्छ।
सिंह राशि– यो समयमा यस राशिको मानिसको मनमा नकारात्मक भावना उत्पन्न हुनसक्छ। आर्थिक स्थिति कामजोर हुनेछ। शत्रु पक्ष सक्रिय र मजबूत हुनेछन्। अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त नहुँदा मन चिन्तित रहनेछ। स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुहोला।
कन्या राशि– यस राशिको लागि यो समय राम्रो रहनेछ। अधुरा रहेका काम पूरा हुनेछ। आर्थिक लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ। कर्यक्षेत्रमा पदोन्नतीको योग रहेको छ। पारिवारिक स्थिति भने राम्रो हुनेछ| स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ।
तुला राशि– यस राशिको लागि यो समयमा भाग्यको पूरा साथ मिल्नेछ। कर्यक्षेत्रमा विशेष लाभ प्राप्त हुनेछ। शत्रु पराजय हुनेछन्। मानसिक स्वास्थमा सुधार आउने देखिन्छ।
वृश्चिक राशि– यस राशिको लागि यो समय त्यति राम्रो देखिँदैन। कर्यक्षेत्रमा वाधा आउन सक्छ। पारिवारिक समस्याले सताउँन सक्छ। परिवारको सदस्यको स्वास्थ्यमा समय देखा पर्न सक्छ। आर्थिक पक्ष कमजोर रहने देखिन्छ।
धनु राशि– यस राशिको लागि यो समय निकै शुभ रहनेछ। अधुरा रहेका कार्य पूरा हुने सम्भावना रहेको छ। प्रतियोगिता तथा कुनै परिक्षाको नतिजा पर्खेर बसेकाको लागि सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ। धार्मिक कार्यमा मन लाग्नेछ।
मकर राशि– वैवाहिक जीवनमा समस्या आउन सक्छ। जीवनसाथीसँग मनमुटावको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। पारिवारिक सम्बन्धमा पनि उतार-चाडव आउने सम्भावना छ। आर्थिक पक्ष निकै कमजोर रहने देखिन्छ। यात्रा गर्नबाट बच्नुहोला।
कुम्भ राशि– यस राशिको लागि यो समय निकै शुभ रहनेछ। पैसा सम्बन्धि मामलामा लाभ प्राप्त हुने सम्भावना रहेको छ। शत्रु पक्ष कमजोर र पराजित हुनेछन्। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ्नेछ। पारिवारिक स्थिति आनन्दमय रहनेछ। मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ।
मीन राशि– मीन राशिको लागि यो समय चुनौतीपूर्ण रहन सक्छ। व्यापार व्यसायमा नोक्सान हुने सम्भावना रहेको छ। कर्यक्षेत्रमा पनि खास सफलता प्राप्त नहोला। जीवनसाथीको साथ मनमुटाव हुन सक्ने देखिन्छ ।
जाह्नवी कपूर अभिनित फिल्म ‘गुञ्जन सक्सेना’ को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
हात किन मिलाउने ?
दुवै हात नभएकी एकमात्र पाइलट जेसिकाको सफलताको कथा